एउटा त्यो पत्र, जसले आइन्स्टाइनलाई जीवनभर पश्चात्तापको आगोमा जलाइरह्यो ! - Birgunj Sanjalएउटा त्यो पत्र, जसले आइन्स्टाइनलाई जीवनभर पश्चात्तापको आगोमा जलाइरह्यो ! - Birgunj Sanjalएउटा त्यो पत्र, जसले आइन्स्टाइनलाई जीवनभर पश्चात्तापको आगोमा जलाइरह्यो ! - Birgunj Sanjal
१६ भाद्र २०७६, सोमबार १७:०९
विश्वविध्वंश गर्ने गरी अघि बढेका नाजीलाई रोक्नको लागि आणविक बम बनाउन अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई लेखिएको पत्रमा आइन्स्टाइनले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए|
हामीले त्यो नयाँ हतियार अमेरिका र ब्रिटिश जनताको हातमा, उनीहरुलाई सम्पूर्ण मानव जातिको प्रतिनिधि तथा शान्ति र स्वाधीनताको संरक्षक मानेर सुम्पिएका थियौं । तर शान्ति तथा स्वाधीनताको त्यो ग्यारेन्टी हामीलाई आजसम्म हेर्न पाइएन । युद्धमा विजय प्राप्त भएको छ… तर शान्ति प्राप्त भएको छैन । संसारलाई भयबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने वाचा गरिएको थियो तर युद्धै समाप्त भएदेखि भय झनै कैयन गुनाले वृद्धि भएको छ ।
कल्पनातीत विनाश र विध्वंश मच्चाउनु र सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो गुलाम बनाइराख्नु नाजीहरुको मानसिकता रहिआएको छ । हामीले त्यो नयाँ हतियार अमेरिका र ब्रिटिश जनताको हातमा, उनीहरुलाई सम्पूर्ण मानव जातिको प्रतिनिधि तथा शान्ति र स्वाधीनताको संरक्षक मानेर सुम्पिएका थियौं । तर शान्ति तथा स्वाधीनताको त्यो ग्यारेन्टी हामीलाई आजसम्म हेर्न पाइएन । युद्धमा विजय प्राप्त भएको छ… तर शान्ति प्राप्त भएको छैन । संसारलाई भयबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने वाचा गरिएको थियो तर युद्धै समाप्त भएदेखि भय झनै कैयन गुनाले वृद्धि भएको छ । संसारसंग वाचा गरिएको थियो दैनिक जीवनको उपभोग्य सामग्रीको अभाव समाप्त हुनेछ तर वास्तविकतामा विश्वको अधिकांश क्षेत्र भोकमरीले ग्रस्त छ र अर्कोतिर केही व्यक्तिले भने आफ्नो आवश्यकताभन्दा बढी संकलन गरिरहेका छन् ।